Igazi - Amaphakethe weBeroean - Ukubuyekezwa kweWebhu.org
Zonke Izihloko > Igazi
Kusuka ku: http://watch towerdocuments.org/deadly-theology/ Kuyo yonke imibono esezingeni eliphakeme yoFakazi BakaJehova edonsela ukunaka kakhulu ukwenqatshelwa kwabo nokungqubuzana kokumpontshelwa uketshezi olubomvu lwegazi-olunikezwe ngabantu abakhathalelayo .. .
OFakazi BakaJehova Negazi, Ingxenye 5
Ezihlokweni ezintathu zokuqala zalolu chungechunge sibheka izici ezingokomlando, zezwe nezesayensi ezesekela imfundiso ye-No Blood yoFakazi BakaJehova. Esihlokweni sesine, sihlaziye umbhalo wokuqala webhayibheli abasetshenziswa oFakazi BakaJehova ukusekela uNo ...
OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 4
Ngakho-ke sihlolisisile izici zomlando, zezwe nezesayensi zemfundiso ye-No damu yoFakazi BakaJehova. Siyaqhubeka nezinhlaka zokugcina ezikhuluma ngokubuka kwebhayibheli. Kulesi sihloko sihlolisisa okokuqala kokubaluleke kakhulu ...
OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 3
UJan 27, 2016
Igazi Njengegazi noma Igazi Njengokudla? Iningi lomphakathi we-JW lifunga ukuthi imfundiso ye-No damu iyimfundiso esebhayibhelini, nokho bambalwa abaqondayo ukuthi yini okudinga ukubanjwa kulesi sikhundla. Ukubamba ukuthi imfundiso ingeyebhayibheli kudinga ukuthi samukele umbono wokuthi ...
OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 2
UJan 20, 2016
Ukuvikela Ukungavikeleki Eminyakeni phakathi kwe-1945-1961, bekukhona okuningi okusha okusha nokutholakala kwesayensi yezokwelapha. Ku-1954, kwenziwa okokuqala ukufakelwa kwezinso okuphumelelayo. Izinzuzo ezingaba khona zomphakathi osebenzisa izindlela zokwelapha ezibandakanya ukumpontshelwa ...
OFakazi BakaJehova Negazi - Ingxenye 1
UJan 6, 2016
Isandulela - Iqiniso noma Inganekwane? Lesi ngesokuqala ochungechungeni lwezihloko ezinhlanu esengizilungisile ezihlobene nemfundiso yeNogazi YoFakazi BakaJehova. Ake ngiqale ngasho ukuthi benginguFakazi KaJehova osebenzayo impilo yami yonke. Esikhathini esiningi seminyaka yami, ngangiy ...
Igazi - "Ubungcwele Bokuphila" noma "Ubunini Bokuphila"?
Isingeniso Lokhu kungokwesithathu ochungechungeni lwezihloko. Ukuze uqonde ukuthi yini ebhalwe lapha kufanele uqale ufunde umbhalo wami wokuqala mayelana nemfundiso yokuthi “akukho gazi” yoFakazi BakaJehova, nempendulo kaMeleti. Umfundi kufanele aqaphele ukuthi isihloko se ...
"Alikho Igazi" - I-Apology
Kwenziwe amazwana ngaphansi kokuthunyelwe kwami ​​kwakamuva mayelana nemfundiso yethu ethi “Alikho Igazi”. Kwangenza ngabona ukuthi kulula kanjani ukucasula abanye bengazi ngokubonakala benciphisa izinhlungu zabo. Lokho bekungeyona inhloso yami. Kodwa-ke, kungenze ukuthi ngibheke kakhulu izinto, ikakhulukazi ...
"Alikho Igazi" - Isilo Esihlukile
Isidalululo ekuqaleni kwengxoxo ka-Apollos enhle kakhulu ngemfundiso yethu ethi “Alikho Igazi” sithi angihambisani nemibono yakhe ngale ndaba. Eqinisweni, ngenza kanjalo, ngaphandle kokukodwa. Lapho siqala ukuxoxa ngale mfundiso phakathi kwethu ekuqaleni konyaka, ...